प्रधानमन्त्री ओलीका नेपाल बदल्ने पाँच योजना - khabarbox.com.npkhabarbox.com.np
प्रधानमन्त्री ओलीका नेपाल बदल्ने पाँच योजना
Home » राजनीति » प्रधानमन्त्री ओलीका नेपाल बदल्ने पाँच योजना
Posted On 5:15 am Author siteadmin Category राजनीति.
१. आधुनिक आत्मनिर्भर राष्ट्र
संविधान सभामार्फत संविधान बनिसकेको अवस्थामा विकास निर्माणको कामलाई तिब्रता दिँदै आधुनिक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउने योजना ओलीको छ । हिजोको सानो, स्वतन्त्र परिवारको निर्वाहमुखी ढाँचाको नभइ आधुनिक, विकसित आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउने उनको तर्क छ । ‘विकासका गतिहरु यति सुस्त गतिमा छन, अव त्यो मान्य छैन’ ओलीले भनेका छन । ओलीले दुई वर्षभित्र खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना पनि अगाडि सारेका छन ।
२. काठमाडौँमा मेट्रो रेल र विद्युतीय बस
काठमाडौँको स्वरुप परिवर्तन गर्ने योजना प्रधानमन्त्री ओलीको छ । त्यसका लागि मेट्रो रेल चलाउने योजना छ । इन्धन संकटको मार खेपेका उपभोक्ताबीच प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युतीय बस संचालन गर्ने योजना अगाडि सारेका छन । मुलुक बदल्ने योजनाहरु ल्याउँदा कतिपयलाई टाउको दुखाईको विषय बनेको निष्कर्ष ओलीको छ । ओलीले भनेका छन–‘हिजोसम्म कसैले पनि नसोचेको कुरा मेट्रो रेल संचालन गर्ने, विद्युतीय बस संचालन गर्ने कुरा विद्धानमित्रहरुलाई अर्को झट्का भयो । यसबाट केही मानिसहरु आत्तिए, केही भ्रममा परे ।’
३. लोडसेडिङ अन्त्य
एक वर्षभित्र लोडसेडिङ समाप्त पार्ने योजना ओलीको छ । १०५ वर्षमा ७ सय मेगावाट मात्र विद्युत निस्केको अवस्थामा एक वर्षभित्र लोडसेडिङ मुक्त गर्ने भनेपछि केही मानिसहरु आत्तिएको ओलीको तर्क छ । उनले भनेका छन –‘१०५ वर्षअगाडि फर्पिङबाट जलविद्युत आयोजना सुरु भयो । अहिले ७ सय मेगावाट मात्र उत्पादन हुन्छ । हिउँदमा त जम्मा ३ सय मात्र । यसअवधिमा हामीले के गर्यौँ ? अव यसरी बस्न सकिदैन । द्रुत गतिमा काम हुन्छ ।’
४. आधुनिक बैदेशिक सम्बन्ध
नाकाबन्दीको मारमा परेका जनताले बैदेशिक सम्बन्धलाई नयाँ हिसावले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखेका छन । प्रधानमन्त्री ओलीपनि यसबाट टाढा छैनन् । राष्ट्रिय हितलाई सर्वेपरि राखेर, राष्ट्रको शीर नझुक्ने गरी नेपालले बैदेशिक सम्बन्ध अगाडि बढाउने ओलीको योजना छ ।
५. बोलेका कुरा पुरा गरेरै छाड्ने
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले बोलेका कुरा पुरा गरेरै छाड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन । उनले भनेका छन–‘मैले गरेका कुराहरु सवै पुरा गर्छु । अहिलेमात्र होइन, १०–२० वर्ष पहिला भनेको कुराको जवाफदेहीता पनि म लिन्छु । यो के भनेको भनेर भुक्तानी कसैले माग्छ भने त्यसको जिम्मेवारी लिन र जवाफ दिन तयार छु । आज बोलेका कुराहरुको जवाफ जुनसुकै बेला दिन तयार छु ।